DHAGEYSO: Caqabadaha iyo howsha hortaalla R/W cusub ee Somalia | Caasimada Online
Home Warar DHAGEYSO: Caqabadaha iyo howsha hortaalla R/W cusub ee Somalia
DHAGEYSO: Caqabadaha iyo howsha hortaalla R/W cusub ee Somalia
Wanshinto DC (Caasimada Online) Idaacadda VOA ayaa barnaamij ka sameesay caqabada horyaala ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, oo toddobaadkii horre uu magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh, iyo howsha hortaala.
Barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa tododbaadkan looga hadlay arrimahaas waxaana marti ku ah Cabdulqaadir Aaden Jangali, oo ah aqoonyahan u dhuun daloola arrimaha Soomaaliya isla markaana wax ka qora.
Cabduqaadir wuxuu horrey u soo noqday Madaxii Bangigii horumarinta ee Soomaaliya ee dowladdii dhexe ee burburtay.
Barnaamijka oo dhameystiran halka hoose ka dhageyso, waxaana idinla socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan oo VOA ka tirsan.
Xafiiska Wararka Wanshinton DC